Microsoft, Apple ary Google dia miasa hanafoana ny tenimiafina ary mampihatra ny fenitra FIDO | Avy amin'ny Linux
Darkcrizt | 06/05/2022 21:59 | fampiharana
Ho fahatsiarovana ny Andro eran-tany amin'ny tenimiafina, izay natao omaly 5 mey, dia nanao "ezaka iarahana" ny Apple, Google, ary Microsoft amin'ny famongorana ny "password".
Ary izany tokoa ireo mpamatsy lehibe rafitra miasa te "hanitatra ny fanohanana ny fenitra fidirana tsy misy tenimiafina mahazatra noforonin'ny FIDO Alliance sy ny World Wide Web Consortium.
ity fenitra ity antsoina hoe "fahazoan-dàlana FIDO multi-fitaovana" na "password" fotsiny. Raha tokony ho andian-tsoratra lava, ity rafitra vaovao ity dia manantena ny fampiharana na tranokala idiranao handefa fangatahana fanamarinana amin'ny telefaona.
Avy eo dia mila mamoha ny telefaona ianao, manamarina amin'ny PIN na ID biometrika, dia afaka manohy ianao. Ny tanjona dia ny hampihatra fanamarinana mora tantana sy tsy miovaova ho an'ny rindrambaiko sy tranonkala, tsy mila mitadidy tenimiafina.
Ao anatin'ny ezaka iombonana, ireo goavambe teknolojia Apple, Google ary Microsoft nanambara omaly maraina fa manolo-tena amin'ny fampiharana ny fanohanana ny fidirana tsy misy tenimiafina izy ireo manerana ny sehatra finday, desktop ary navigateur rehetra fehezin'izy ireo amin'ny taona ho avy.
Midika izany fa ny fanamarinana tsy misy tenimiafina dia ho hita amin'ny sehatra fitaovana lehibe rehetra ato ho ato: rafitra fiasana finday Android sy iOS, Chrome, Edge, ary Safari, ary tontolo desktop Windows sy macOS.
“Sahala amin'ny famolavolanay ny vokatray ho intuitive sy mahery, dia mamolavola azy ireo ho an'ny tena manokana sy azo antoka ihany koa izahay. Ny fiaraha-miasa amin'ny indostria hananganana fomba fidirana vaovao sy azo antoka kokoa izay manome fiarovana tsara kokoa sy manala ny fahalemen'ny tenimiafina no fototry ny fanoloran-tenantsika amin'ny fananganana vokatra izay manome fiarovana ambony indrindra sy traikefan'ny mpampiasa tsy misy olana, ao anatin'ny iray. fampahalalana manokana. azo antoka, ”hoy i Kurt Knight, talen'ny marketing vokatra amin'ny sehatra ao amin'ny Apple.
Fidirana fidirana tsy misy tenimiafina dia hamela ny mpampiasa hisafidy ny findainy ho fitaovana fanamarinana voalohany ho an'ny fampiharana, tranokala, ary serivisy nomerika hafa, araka ny nohazavain'i Google tamin'ny antsipiriany tao amin'ny lahatsoratra bilaogy navoaka omaly.
dia dia ho ampy ny mamoha ny telefaona miaraka amin'ny hetsika voafaritry ny default (mampidira kaody PIN, manaova lamina, na mamoha amin'ny alalan'ny fanondro) mba hifandraisana amin'ny serivisy tranonkala tsy mila mampiditra tenimiafina, noho ny fampiasana mari-pamantarana kriptografika tokana antsoina hoe "key access", nozaraina teo anelanelan'ny telefaona sy ny finday. tranokala.
“Ity zava-bita ity dia porofon'ny asa fiaraha-miasa atao manerana ny indostria hanamafisana ny fiarovana sy hanafoanana ny fanamarinana ny tenimiafina efa lany andro. Ho an'ny Google, ity zava-bita ity dia maneho efa ho folo taona niara-niasa tamin'ny FIDO, ho ampahany amin'ny fanavaozana mitohy ataonay mankany amin'ny hoavy tsy misy tenimiafina. Manantena izahay fa ho azo ampiasaina amin'ny Chrome, ChromeOS, Android, ary sehatra hafa ny teknolojia mifototra amin'ny FIDO, ary mamporisika ny mpamorona fampiharana sy tranokala izahay handray izany, mba hahafahan'ny olona rehetra mianatra bebe kokoa. ' hoy i Mark Risher, talen'ny fitantanana ny vokatra ao amin'ny Google.
Amin'ny fametrahana ny fifandraisana miankina amin'ny fitaovana ara-batana, ny hevitra dia ny mpampiasa dia mahazo tombony amin'ny fahatsorana sy ny fiarovana. Raha tsy misy tenimiafina dia tsy mila mitadidy ny antsipirian'ny fidiranao ho an'ny Serivisy ianao na mampandefitra ny fiarovana amin'ny fampiasana indray ny tenimiafina mitovy amin'ny toerana maro.
Toy izany koa, miaraka amin'ny rafitra tsy misy tenimiafina, dia ho sarotra kokoa ho an'ny mpijirika ny mampandefitra ny angon-drakitra fidirana lavitra, satria ny fidirana dia mitaky fidirana amin'ny fitaovana ara-batana; ary, raha ny teoria, dia ho sarotra kokoa ny handaminana ny fanafihana phishing izay iantefan'ny mpampiasa mankany amin'ny vohikala sandoka haka ny tenimiafina.
Na dia efa maro aza ny fampiharana malaza no manohana ny fanamarinana FIDO, ny fidirana voalohany dia nitaky ny fampiasana tenimiafina alohan'ny hatsanganana ny FIDO: midika izany fa ny mpampiasa dia mbola marefo amin'ny fanafihana phishing izay misy ny tenimiafina voasakana na nangalatra. Saingy ny fomba fiasa vaovao dia hanafoana ny fepetra takiana amin'ny tenimiafina voalohany, hoy i Sampath Srinivas, talen'ny fitantanana ny vokatra ho an'ny fanamarinana azo antoka ao amin'ny Google ary filohan'ny FIDO Alliance.
Efa an-taonany maro no nanandrana nanala ny tenimiafina ireo orinasa, saingy tsy mora ny nahatongavana tany. Ny tenimiafina dia miasa tsara raha lava, kisendrasendra, miafina ary tokana, fa ny singa maha-olombelona amin'ny tenimiafina dia mbola olana.
Ary farany, raha te hahalala bebe kokoa momba izany ianao dia afaka mijery ireo antsipiriany Ao amin'ity rohy manaraka ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Microsoft, Apple ary Google dia miasa hanafoana ny tenimiafina ary hampihatra ny fenitra FIDO
Ny GitHub izao dia mitaky ny mpampiasa rehetra izay manome kaody hampiasa FA2 amin'ny faran'ny taona 2023